Miresaka Fahalalaham-Pitenenana Amin’ny Alalan’ny Mini-Video Ny Tanora Makedoniana · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 28 Jona 2016 5:39 GMT
Vakio amin'ny teny Español, русский, Türkçe, English
Nandray anjara tamin'ny resaka fahalalaham-pitenenana tamin'ny lahatsary fohy, izay tafiditra amin'ny fifaninanana misokatra ho an'ny rehetra ary nojerena nandritra ny Fetiben'ny Filma Frantsay tao Skopje ny tanora artistan'ny video. Na ny fetibe na ny fifaninanana dia samy ao anatin'ny fiaraha-miasa ara-kolontsaina maharitra misy eo amin'i Frantsa sy i Makedonia.
Ny iditra roa voalohany dia tafiditra ao amin'ny sarimihetsika mangina mahazatra, izay mipaka avy hatrany any amin'ny mpijery tsy mila mamantatra ny fiteny. Ny lahatsary izay voafantina ho mpandresy ihany tamin'ny fifaninanana dia i “Shhh…” nataon'i Bruno Veljanovski:
Ny “On and Off”, izay fohy vita tamim-pahaizana nataon'i Natalija Stanojevikj no nahazo ny toerana faharoa:
Miaraka amin'ny fahalalaham-pitenenana indray, ny lahatsary amin'ny teny anglisy nataon'i Elion Jashari, “Speak louder” [mitenena mafy kokoa] no niresaka pollution in Tetovo, tanandehibe iray ao avaratra andrefan'i Makedonia:
Samy azon'ny daholobe jerena ao amin'ny Rakitsary YouTube iray lisitra avokoa ny iditra fito nandray anjara tamin'izany.
Ny Ivontoerana Frantsay ao Skopje sy ny Orina Mpanasoa Metamorphosis, izay efa nanome fanazarana amin'ny fanitsiana lahatsary ihany koa ho an'ny kandidà sasantsasany, no nanomana ny fifaninanana. Ny mpandresy dia handray anjara amin'ny Fetibe Off-Courts ao Trouville any Normandy amin'ny Septambra ho avy io. Nanomboka tamin'ny taona 2000 ity lanonana fanao isan-taona ity, ary mampiranty sarimihetsika fohy, mozika, zavakanto ara-maso ary fampitan-kevitra amin'ny endrika vaovao novokarina tao Frantsa sy Quebec ao anatin'ny herinandro.